Isak oo qandaraas la galay kooxda Borussia Dortmund | Get Latest News From Horn of Africa
Home Soomaalidda Isak oo qandaraas la galay kooxda Borussia Dortmund
Isak oo qandaraas la galay kooxda Borussia Dortmund
In muddo ah ayaa la hadal hayay in ciyaar-yahanka kubbada cagta ee kooxda AIK Alexander Isak uu ku wareegi doono kooxda jarmalka ee Borussia Dortmund, hase yeeshee iminka ay middaasi dhaboowday.
Ciyaar-yahanka 17-jirka Alexander Isak ayaa horraantii loola xiriirinayey inuu qandaraas la galo kooxda kubbadda cagta ee Real Madrid.
Hase yeeshee ey soo baxeen gabagabadii toddobaadkii ina dhaafay warar sheegeya inuu ku biiri doono kooxda Dortmund ee hor-yaalka kubbadda cagta ee dalka Jarmalka. Iyadoona maanta qalinka lagu duugey qandaraaskaasi.
Abbaaraa duhur-nimadii maanta oo isniin ah ayay kooxda Borussia Dortmund soo daabacday aa lagu soo daabacay qoraal la xiriira qandaraaska uu Isak la galay kooxda iyyadoona lagu soo gabagabeeyey qoraalkaasi hash-tagga loogu magac-darey: welcomeisak – soodhowow isak.
Alexander Isak ayaa ah ciyaar-yahan aad xirfad ugu leh xirfaddiisa oo ey tartan ugu jireen sidii ey kooxo badan oo yurub ka ciyaaraa ugu hanan lahaayeen. Aad baanu ugu farax-sannahey inuu doortay kooxda Dortmund. Waxaanuna hubnaa inuu ciyaar-yahankani saameeyn ballaaran ku yeelan doono is-bedelka ciyaarta, sida uu sheegay madaxa ciyaaraha ee kooxda Dortmund Michael Zorc mar uu qoraal ku daabacay bogga kooxda.
Kooxad AIK ayaa sidoo kale boggeedda shaashada interner-ka ku daabacday inuu Alexander Isak sida ugu dhakhsiyaha badan ugu wareegi doono koox cusub.
– Haddaba koox ka mid ah tobanka kooxood ee Yurub ugu sarreeya ay la wareegto ciyaartoy ay kooxdu soo saartay waa tallaabo lagu aqoonsaneyo xirfadda sare ee kooxda kubbadda cagta ee AIK, sida bogga shaashadda ee kooxda ku daabacay madaxa ciyaaraha ee AIK Björn Wesström.
Waxaa la hadal hayaa inuu Isak noqon doono ciyaartooy lagu kala iibsado dhaqaalihii ugu badnaa ee hor-yaalka Sweden. Midkii ka horeeyay ayaa dhacay sannadkii 2001 sannadkaasina oo Zlatan Ibrahimovic ay kooxda Ajax kaga iibsatay kooxda kubbada cagta Malmö FF dhaqaale gaarsii-san 82 malyan oo koronka iswiidhishka.
Isak ayaa kooxda AIK ee hor-yaalka kubbadda cagta Sweden u dhaliyay sannadkii ina dhaafay 10 gool ciyaaro gaarsii-san 24.